Weeraro kala duwan oo caawa ka dhacay qeybo kamid ah Muqdisho.
Isniin Aug 13: Maleeshiyo hubeysan ayaa lagu soo waramayaa inay caawa weerar culus oo aan horey loo arag ku qaadeen saldhiga degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Kooxdaan weerarka qaaday ayaa la sheegay inay aad u hubeysnaayeen iyagoo baasuukayaal iyo bambooyin ku garaacay saldhiga iyo agagaarkiisa, xili ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliska Dowlada KMG ah ee Somalia.
Cabdirisaaq Faarax "Insaji" oo kamid ah dadka deegaanka Hodan ayaa qadka telefoonka iigu sheegay inay kusoo baraarugeen dhawaaqa bambooyin iyo qoryaha culculus oo ka dhacaya agagaarka saldhiga Hodan.
"Dhamaan shacabkii ku dhaqnaa Hodan ayaa mar qura wada naxay, iyagoo xabad dhulka wada dhigay, kadib markii ay is qabsatay rasaas iyo bambooyin culus oo ka dhacayay agagaarka saldhiga Hodan" sidaasi waxaa yiri C/risaaq Faarax.
Qaraxyada ka dib Tacshiirado xoogan ayaa waxaa is dhaafsaday ciidamada booliska saldhigga iyo kooxaha weerarka soo qaaday oo aan la garaneyn.
Lama oga wali qasaaraha ka dhashay qaraxyadaan iyo tacshiiradaha xigsaday oo socday ku dhowaad 20 daqiiqo.
Ciidamada booliska saldhiga Hodan oo helay gurmad ayaa baaritaano ka bilaabay goobaha u dhow dhow saldhiga Hodan, iyadoo dhamaan dadka ku dhaqan agagaarka saldhiga ay guryahooda ku xaroodeen.
Waddooyinka u dhow dhow saldhiga Hodan ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan booliska DF oo aagag ugu jira, iyadoo aysan jirin cid socota halkaasi.
Dhinaca kale, weerar bambaano loo adeegsaday ayaa caawa fiidkii lagu qaaday xarunta degmada Shibis ee magaalada Muqdisho, halkaaso ay degan yihiin ciidamo ka tirsan Dowlada KMG ah ee Somalia.
Marka ay dhaceen bambooyinka lagu weeraray xarunta degmada shibis ayaa lagu soo waramayaa sida caadada u aheyd ciidamada DF inay rasaas aan loo meel dayin fureen taasoo la sheegay in qasaaro ay kasoo gaartay dad u dhowaa goobta uu falka ka dhacay.
Weeraradaan caawa ka dhacay Muqdisho ayaa kusoo aadaya xili maanta dhowr weerar ay ka dhaceen Muqdisho , kuwaasoo lala eegtay ciidamada Dowlada Federaalka Somalia.
Meydadka labo wiil oo dhuunta laga gooracay sida xoolaha oo kale ayaa daraad laga helay inta u dhaxeysay Maqaayada Inanta iyo Abaarso ee galbeed magaalada Hargeysa.
Caruurtaan ayaa oo da'dooda lagu kala sheegay 10 jir iyo 8 jir ayaa ayaa lagu waramay in markii ugu dambeysay ay ilaalinayeen xoolo daaqayay, iyadoo meydkoodana soo gaarsiiyay isbitaalka weyn eee magaalada Hargeysa ciidamada CID-da Somaliland.
Agaasime ku xigeenka Isbitaalka Guud Axmed Daahir Aadan ayaa Saxaafada u xaqiijiyay in caruurtaasi la gooracay sida xoolaha oo kale.
Agaasime K/xigeenka waxa uu sheegay in labada caruurta ah ay ka muuqatay in midni lagu gooracay, isla markaana midka weyn ay caloosha dibada usoo daadatay.
Dr.-ka ayaa sheegay inay baareen jirka caruurtaasi isla markaana aysan jirin wax ka maqan xubnahoodii.
Midka kamid ah ehelada carurta ayaa Saxaafada u sheegay in meesha lagu gooracay caruurta laga helay kabo nin iyo go'o isla markaan raadka qofka la arkay balse ilaa xiligaan la ogeyn halka uu tagay qofkaasi.
Taliyaha Boliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubad ayaa sheegay inay Ciidamadu baarayaan dadkii ka dambeeyay arintaan lagu gooracay caruurta isagoo ka gaabsaday inay dad u ku tuhmayaan arintaan ay jiraan iyo in kale.
Si kastaba, dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland ayaa falkaan lagu gooracay caruurtaan yar yar ka wada naxay, iyagoo ka codsaday Dowlada inay sida ugu dhaqsiyaha badan usoo qabato cidii ka dambeysay dilka caruurta.